अश्रु ग्यास र लाठी चार्ज गरी डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याईयो (भिडियोसहित) -
अश्रु ग्यास र लाठी चार्ज गरी डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याईयो (भिडियोसहित)
३ श्रावण २०७५, बिहीबार १८:५५ 344 पटक हेरिएको
सरकारको आलोचना प्रतिपक्षका लागि मसला भएपनि जनताका लागि नोक्सानी हुन जान्छ । दुई तिहाइको सरकारले २÷३ वटा काम पनि स्मुथली गर्न सकेन, पाएन वा गरेन भने जनतामा चरम निराशा पैदा हुन्छ ।
सुुरुवाती दिनमा सिण्डिकेट तोड्छु भन्दा आम सर्वसाधारणबाट वाहवाही पाउने सरकार यहि हो । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छु भनेर प्रशंसा पाउने सरकार यहि हो । सुनकाण्डमा ठुला माछा समात्छु भनेर मेघ झै गर्जिने ताली पाउने सरकार पनि यहि हो ।
तर यी तिनै विषयमा पाएको ताली हेर्दा हेर्दै, आँखै अगाडि गालीमा परिर्वतन हुँदैछन् । आँफु प्रतिपक्षमा बसेका बेला सही लागेर समर्थन गरेका डा.गोविन्द केसी आँफु सत्तामा पुगेपछि हेड एक भएका छन् । बेसिकल्ली उही माग राखेर अनसन बसेका सत्यग्र्राहीलाई आज सही देख्ने प्र्रतिपक्ष, हिजो उनका माग पुरा गर्न र उनिसँग गरेको सम्झौता पुरा गर्न तयार थिएन ।
क्या गज्जब छ यो राजनीति, कसैको निष्ठा कसैको राजनीतिक मुद्धा भैरहेको छ । सबका सब नाटक गर्छन् । उदेश्य एउटै र सत्ता प्राप्ती । सकियो । सत्तामा पुगेर देश र जनताका लागि यो यो गर्छु भन्ने लिष्ट कसैसँग छैन । भोट जनताको लिने तर काम चुनावमा सघाउनेहरुको हितमा गर्ने ?
व्यापारीहरुले चुनावमा दिएको २÷३ करोडको गुण तिर्न ३ करोड जनताको जीवन र भविष्यलाई बली चडाउनेहरु राजनीतिज्ञ होइनन् । व्यापारी हुन् । शुद्ध व्यापारी । छातीमा आँट भएका अनुसन्धानकर्ता र मुटुमा राष्ट्रप्र्रेम धड्किने खोज पत्रकारहरुले सार्वजनिक गरिदिउन कि यो मुलुकका कति जना नेता, सांसद, मन्त्रीहरुको कुन कुन व्यापारमा शेयर लगानी छ ?
को को चन्दा दिएर संसद छिरेका हुन् । जनताको सेवक हुन्छु भनेर राजनीति गर्नेले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा लगानी गरेको छ । लगानी सेवा हुन्छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै कुरा गरौँ ।